DAAWO:Xiisadii Camay & Gaas oo cirka sii gashay Iyo Wasiiro safka hore kasoo galay – Puntlandtimes
DAAWO:Xiisadii Camay & Gaas oo cirka sii gashay Iyo Wasiiro safka hore kasoo galay
December 5, 2018 Abdurahmaan Yuusuf
GAROWE(P-TIMES)- Cabdi Xirsi Qarjab wasiirka warfaafinta Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa saxafiyiinta faray in aysan khal khal gelin xaalada Puntland, waxaana usoo bandhigay sida ugu haboon ee la doonayo inay wararka u tabiyaan. RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA
Dhinaca kale isagoo ka hadlayey xiisada hogaanka Puntland ayuu kula saftay C/weli Gaas, wuxuuna sheegay inuu xaq u leeyahay madaxwaynuhu inuu soo saaro gudiga xalinta iyo khilaafaadka oo uu sheegay inaan dadka lagu wareerin gudiga uu magacaabay Cabdixakiim Camay madaxwyane ku xigeenka Puntland.
RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA
Mahad Cumar Saleebaan says:
Burcada isugu yeerta “Dowlad” laakin Soomaali uu taqaan “kooxda Nabar iyo Naxdin”
HOGAAMIYE KOOXEED Farmaajo
Reer Puntland hada nahay jajuusinta musharaxiin isugu yeera ma rabno ha aadan magaalada qaraxyada iyo qaraajinta laga soo diray. Madaxweyne Cabdiweli Puntland ha ka badbaadsho jajuusinta hogaamiye kooxedka Muqdisho soo diray.
Kan faalada hoose qoray ama Waa indhool +dhagoole ama waa ciyaalka Gaas gurigiisa jooga.
Adeer dhibka PUNTLAND ka jira cid aysan u muuqan ma jirto, lacag false-da ah, mushahar la’aan, nabadgelyo la’aan, musuqmaasuq, dhulkii PUNTLAND oo maalinba lagu soo durkayo.
Isimadii maxamud saleebaan buu xataa isku diray.
Madaxweyne Gaas soo noqo marlabaad
Kuwa laga soo diray villa xamar puntland maslaxad uma hayaan
Insha Allaah iyagoo hungo ah bay xamar kulaaban